Netra Visual Intelligence: Araho maso amin'ny Internet ny marikao. Martech Zone
Netra Visual Intelligence: Araho maso amin'ny Internet ny marikao
Alarobia, Jolay 12, 2017 Talata, Jolay 11, 2017 Douglas Karr
Netra dia fanombohana mampivelatra ny teknolojia Fankatoavana sary miorina amin'ny fikarohana AI / Deep Learning natao tao amin'ny MIT's Computer Science and Artical Intelligence Laboratory. Ny rindrambaiko Netra dia mitondra firafitra amin'ny sary tsy voaorina teo aloha miaraka amin'ny mazava tsara. Ao anatin'ny 400 milliseconds, Netra dia afaka manisy marika ny sary notarafina ho an'ny marika marika, ny sarin'ny sary ary ny toetran'ny olona.
Mizara sary 3.5 miliara amin'ny media sosialy isan'andro ireo mpanjifa. Ao anatin'ny sary zaraina ara-tsosialy dia misy fahitana sarobidy momba ny hetsiky ny mpanjifa, ny zavatra mahaliana azy, ny safidin'ny marika, ny fifandraisany ary ny zava-mitranga lehibe eo amin'ny fiainana.
Ao amin'ny Netra, mampiasa AI, fahitana solosaina ary fianarana lalina izahay hanampiana ireo mpivarotra hahatakatra tsara izay zarain'ny mpanjifa; ny teknolojia misy antsika dia afaka mamaky sary amin'ny ambaratonga marobe izay tsy afaka natao teo aloha. Mba hanatanterahana izany dia manomboka amin'ny fakana sary ireo sary hita an-tserasera izay misy logo manokana izahay. Avy eo izahay dia naka, nilaza, ny sary famantarana ny Starbucks, ary nanova azy tamin'ny fomba maro samihafa hamoronana setroka fanofanana hahafahan'ny teknolojia hahafantatra ireo logo Starbucks voavily, na amin'ny seho feno olona toa ny fivarotana kafe. Avy eo dia manazatra ireo maodelin'ny solosaina izahay amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny atiny biolojika sy ny sary voaova syntetika. Richard Lee, CEO, Netra
Ity ambany ity dia ohatra iray amin'ny sary iray izay nalain'ny rindrambaiko Netra tao amin'ny Tumblr. Na dia tsy miresaka aza ny fanazavana Ny endrika avaratra, Ny rindrambaiko Netra dia afaka mamaky sary ary mamantatra ny fisian'ny sary famantarana miaraka amin'ireo zavatra mahaliana hafa, ao anatin'izany:
Zavatra, sary ary hetsika toa ny Mountaineering, Summit, Adventure, Snow, ary Winter
Lehilahy fotsy hoditra 30-39 taona
Ny sary famantarana ny North Face manana fahatokisana 99%
Netra dia manolotra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny dashboard miorina amin'ny tranokala handefasana sary ary / na hamakafaka ny sary ara-tsosialy avy amin'ny Twitter, Tumblr, Pinterest, ary Instagram. Ny rindrambaiko dia misy ara-barotra ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny dashboard miorina amin'ny tranonkala na API ho an'ny orinasa rindrambaiko orinasa. Ny teknolojia fototra ao Netra dia azo ampiharina koa ao anatin'izany ny fanondroana sary sy ny fikarohana (fitantanana ny fananana nomerika) ary ny fikarohana amin'ny sary.
Afaka mijery ny mpampiasa Analytics amin'ny tagy sary ary valio ireo fanontaniana lehibe toy ny:
Aiza ny marika misy ahy aseho amin'ny sary ary amin'ny toe-javatra manao ahoana?
Inona avy ireo demografika mifangaro amin'ny marikao amin'ny sary?
Inona avy ireo demografika miaraka amin'ireo marika mpifaninana amiko?
Inona avy ireo hetsika / marika izay liana amin'ny mpanjifa miaraka amin'ny marika?
Ny mpampiasa dia afaka manivana sary mifototra amin'ny haavon'ny fifamatorana ary koa ny tontolon'ny sary. Netra koa dia manana fahaizana mamorona mpihaino manokana arakaraka ny atiny navoaka tao anaty sary an-tserasera. Ohatra, Reebok dia afaka nampiasa ilay rindrambaiko hitodihana any amin'ireo mpanjifa izay mazoto manao fampiasan-tena ataon'ny Crossfit ho an'ireo mpanjifa izay nandefa ny sarin'izy ireo nanao hetsika fanazaran-tena tao anatin'ny roa herinandro lasa.
Mino izahay fa manana haitao tsara indrindra amin'ny kilasy amin'ny tsenan'ny famantarana sy ny marika. Izahay koa dia manavaka ny tenantsika amin'ny fahaiza-manavaka sary fanampiny. Iray ihany ny orinasa hafa afaka manao marika, logo, zavatra, seho ary olombelona, ​​ary Google izany. Ao amin'ny lohan'ny lohan'ny lohan'ny loha, dia manao indroa tsaratsara kokoa noho izy ireo isika. Ny vahaolana ara-pitsikilovan'i Netra dia afaka manome angon-drakitra tena sarobidy hampitomboana ny angon-drakitra misy (ohatra ny mombamomba ny mombamomba, ny fanazavana an-tsoratra, ny angona cookie) efa ananan'ireo mpanao dokambarotra sosialy. Richard Lee, CEO, Netra
Ny fampiharana azo ampiharina dia ahitana fanaraha-maso ny marika, fihainoana ara-tsosialy, fanentanana ara-tsosialy, marketing amin'ny influencer, fikarohana ara-barotra ary dokam-barotra.
Mangataha fidirana amin'ny Netra
Tags: aifanaraha-maso ny marikafianarana lalinaendrika fankatoavanafanekena saryInstagramfianarana milinanetraPinterestprofilingfankatoavanareebokny tavany avaratraTumblrTwitterfanekena sarymaso fikarohana
Mia: Fanamarihana momba ny fandraharahana eo an-toerana, Fahatokiana ary CRM
ConnectLeader TopRung: B2B Sales Gamification sy Performance Management Tool